Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (16GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i7 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB) ၏စျေးနှုန်း ...
အစကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှတ်ချက်စာအုပ်Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (16GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i7 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB)
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (16GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i7 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇူလိုင်လ 2019 15 14: 12
15.6 လက်မအရွယ် IPS Intel က i7 i7-8550 16GB DDR4 256GB SSD ကို MX150 2GB Windows10 #06220537 မှတဆင့်စျေးသမိုင်း Xiaomi က Xiaomi က laptop ကိုမှတ်စုစာအုပ်
€ 1.036,05 - 2019 မေလ 30
€ 709,08 - 2019 မေလ 29
€ 1.036,05 - 2019 မေလ 23
€ 725,24 - 2019 မေလ 16
€ 1.036,05 - 2019 မေလ 15
€ 762,22 - 2019 မေလ 14
€ 1.036,05 - 2019 မေလ 11
€ 709,08 - 2019 မေလ 10
မှ: သြဂုတ်လ 2018 9
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 1.078,18 - 20189သြဂုတ်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 709,08 - 2019 မေလ 10
15.6 လက်မအရွယ် IPS Intel က i7 i7-8550 16GB DDR4 256GB SSD ကို MX150 2GB မှတဆင့် Xiaomi က Xiaomi က laptop ကိုမှတ်စုစာအုပ် ...
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကို 15.6 လက်ဗွေ Core i7-8550 4.0GHz 16GB 256GB RAM ကို SSD ကို drive ကို ...
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်ဗွေအသိအမှတ်ပြု
[အီတလီစတော့အိတ်] Xiaomi က Mi Notebook Pro ကို 15.6 လက်ဗွေ Core i7-8550 4.0GHz 16GB RAM ကို 256GB ...
[ဂျာမဏီစတော့အိတ်] Xiaomi က Mi Notebook Pro ကို 15.6 လက်ဗွေ Core i7-8550 4.0GHz 16GB RAM ကို ...
[စပိန်စတော့အိတ်] Xiaomi က Mi Notebook Pro ကို 15.6 လက်ဗွေ Core i7-8550 4.0GHz 16GB RAM ကို 256GB ...
Xiaomi က Mi Pro ကိုလေတပ် Laptop ကို 15.6 လက်မ Notebook Intel Core i7-8550 CPU ကို NVIDIA 16GB 256GB SSD ကို GDDR5 ...
Xiaomi က Mi Pro ကိုလေတပ် Laptop ကို Notebook 15.6 လက်မ Quad Core CPU ကို NVIDIA 16GB 256GB SSD ကို GDDR5 ...
Xiaomi က Notebook Pro ကို Win10 15.6 i7 လက်မ Intel Core Quad-Core 8550 16 / 256GB လက်ဗွေအာရုံခံ Laptop ကို
NEW မူရင်း Xiaomi က Notebook Pro ကိုလေတပ် 15.6 '' Laptop ကို Intel Core CPU များ Nvidia GeForce i7 16GB 256GB ...
Xiaomi က Notbook 15.6 Pro ကို Intel Core i7 16G 256GB သိုးထီး SSD ကို Windows 10 2G ဆကျကပျကတ် 1920x1080 ...
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကို
ထောကျပံ့တဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်ပါသည် လက်ဗွေရာအသိအမှတ်ပြုမှု။ တစ်ဦးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး 15.6 လက်မ FHD Display, ဘဝကိုရန်သင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဆောင်တတ်၏။ မှပံ့ပိုးသည် Intel Core Processor, Nvidia GeForce MX150 ဂရပ်ဖစ် featuring မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်သေချာ။ 256GB ကြီးမား hard disk ကိုသိုလှောင်မှု သငျသညျအတှေ့အကွုံကို အသုံးပြု. ချောမွေ့တတ်၏။ Dual-band ကို 2.4GHz / 5.0GHz Wi-Fi ထောက်ခံ, သင်မြန်နှုန်းမြင့် surfing သေချာ။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
7GHz မှတက်● Intel Core i8550-1.8U Quad Core 4.0GHz,
● Nvidia GeForce MX150 GPU ကို
ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအတွက်ပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်, ထောက်ခံ dual ဂရပ်ဖစ်
အဆင့်မြင့် multitasking များအတွက်● 16GB DDR4 RAM ကို
● 256GB SSD ကိုသိုလှောင်စွမ်းဆောင်ရည်
1.0MP ရှေ့ကင်မရာသင်အမှတ်ရစရာအချိန်လေးကိုဖမ်းယူဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat ခွင့်ပြု
● HDMI output သင့်အမြင် Options ကိုတိုးချဲ့
သငျသညျအနားမှာမျက်နှာပြင်နှစ်ခုအခြမ်းကို set up သို့မဟုတ်ရုံရုပ်ပုံများကိုချဲ့ရန်တစ်ခု HDTV သို့မဟုတ် high-definition မော်နီတာမှ device ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်
● Dual-Band 2.4GHz / 5.0GHz Wi-Fi
802.11a /b/ g / n / ac ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးမရရှိနိုင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်၏အကွာအဝေးအတွင်းနေချိန်မှာသင်က Web ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြု
CPU ကို: Intel Core i7-8550U
graphic chipset: Nvidia GeForce MX150
မော်ဒယ်: Mi Notebook Pro ကို
Hard Disk ကို Interface အမျိုးအစား: PCI-E
Hard Disk ကိုမှတ်ဉာဏ်: 256GB SSD ကို
RAM ကိုပေါက်အရေအတွက်: တစ်ခုမှာ
ဘလူးတုသ်: ဘလူးတုသ် 4.1
WIFI: 802.11a/b/ g / n / ac ကြိုးမဲ့အင်တာနက်
စံ HDMI အပေါက်: ဟုတ်ကဲ့
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: 7.4V / 8000mAh, Li-ion ပေါ်လီမာဘက်ထရီ
အချိန် .: 1-2 နာရီအားသွင်း
standby အချိန်: 7-8 နာရီ
ဘာသာစကားများ: Bulit-in ကိုတရုတ်ဗူး။
package အရွယ်အစား: 44.00 x ကို 33.00 x ကို 11.50 စင်တီမီတာ / 17.32 x ကို 12.99 x ကို 4.53 လက်မ
package အလေးချိန်: 3.3740 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 36.00 x ကို 24.40 x ကို 1.50 စင်တီမီတာ / 14.17 x ကို 9.61 x ကို 0.59 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 1.9500 ကီလိုဂရမ်
တရုတ်က MacBook Killer - ဆယျနာရီ BATTERY - Xiaomi က Mi Notebook Pro ကို
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း & လက်ကမ်းတွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ $ 900 "MacBook" - သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဝယ်ပါ!
Xiaomi က Mi Notebook PRO - ဆုံးပြည့်စုံမှတ်စုစာအုပ် Xiaomi က! ဤသည်အံ့သြဖွယ်ပါ! - လုပ်ဆောင်ခြင်းမာခ်
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (16GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i7 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB) ဗီဒီယိုများ
€ 1.167,53 - 2019 မေလ 30
€ 799,06 - 2019 မေလ 29
€ 1.167,53 - 2019 မေလ 23
€ 817,27 - 2019 မေလ 16
€ 1.167,53 - 2019 မေလ 15
€ 858,95 - 2019 မေလ 14
€ 1.167,53 - 2019 မေလ 11
€ 799,06 - 2019 မေလ 10
ဒီထုတ်ကုန် Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (16GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i7 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB) ဘယ်လောက်ရှိသလဲမှပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (8GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i5 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB)
Acer မှ VX5 - 591G - 58AX Gaming Laptop ကို Laptop ကိုကွန်ပျူတာ (i5-7300HQ, GTX1050, 8GB RAM ကို)
Xiaomi က Mi M365 Scooter လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇနှင့် 30km မှအကွာအဝေး)